Umhla My Pet » Njani ukuba lungathandani Safe
ukubuyekezwa: Jun. 03 2020 | 4 min ukufunda
Kodwa ungathanda ukukwenza oko, ukuthandana Ngumdlalo oyingozi. Musa ukuthetha nabantu ongabaziyo ukuze imvo yesandi ukunika abantwana kodwa isicwangciso ukuba bayeke enye, li drawback ubuncinane Ecacileyo. Ngaphandle kokuba ufuna ukutshata umzala wakho, ngokufumana umntu ukuba sihlale phantsi iya kubandakanya ukuqhagamshelana nabantu angabaziyo iliso, bebayala kwincoko adibana nabo one-on-one.
Kukho iingozi ezimbini ezahlukileyo apha. Eyokuqala kukuba ukuze sibonakale umhlobo wakho entsha ukuba abe ngomabophe epheleleyo kodwa eneneni isenokuba philanderer zinegazi elibandayo kunye irekhodi ngokuqhekezwa-intliziyo. Baza kucinga nto yokukhokelela kuwe, udlala imidlalo yokusigqusha kwiimvakalelo zakho. Yiloo embi ngokwaneleyo kwaye woyise mhlawumbi Ndidikiwe abantu abanjalo sele.
Ingozi yesibini mandundu ngakumbi, nokuba yinto usebenziswano anqabe kakhulu. eneneni Owasemzini enomtsalane odibana bar onokuba yohlwaya abasindileyo sibhedlele basekuhlaleni. Kunokuba bafumane umntu owenza uzive ekhuselekileyo nenokhuselo ubomi bakho, Ungayalatha ubenomntu onokumvusa ngubani oza ukubeka ukhuseleko lwakho emngciphekweni kwaye zifuna ukuba arholwe uthotho imiyalelo yenkundla kunye neenkqubo alarm.
Nangona amathuba yokuhlangana umntu ofana nalo ngekhompyutha lincinane kakhulu, Iyafuna umgudu ukuba balumke. Kwesi sahluko, esiyenzayo ukuthetha ngendlela yitshintshe ngokucacileyo le Iqela lesibini kwaye uhlale ukhuselekile online.
Unciphiso ungaziwa Zombini Iindlela
Xa udibana nomntu ebharini, lokuqala pick-up njengoko kakhulu itshekhi wokhuseleko njengoko itshekhi-ngaphandle. Ukuba unokuzibona umntu nomtsalane ehleli yedwa etafileni ecaleni nowenu, phambi kokuba kubanikela ujongo ngaphambi kokuba wenze naluphi na uhlobo zoqhagamshelwano zonke kuni kugcineni kwabo imizuzwana embalwa ukubona indlela ndiziphatha kubalungiseleli, bebodwa okanye nabantu abadlula. Ukuba bekrwada, nekratshi okanye nje azenzeki angazithandiyo, akunamsebenzi kangako ukuba umntu Looker bona, wena nangoku uza makakhangele athi gca ngokuthi. Kuphela ukuba sele uqinisekile ukuba siyafana naba-, abantu abaphucukileyo ngaba uzama ukwenza umjonge, ndilunyothule nesibindi ngobuso yokugxothwa uze wenze itshukumo yakho.
Yaye xa wena wenze loo intshukumo, oyenzayo ukhangele imiqondiso kancinane akuxelela ukuba umntu uthetha ukuba ungaphantsi kwama eqhelekileyo. Kukho zonke iintlobo imikhondo ukukunceda ukuba wenze ukuba: indlela onxiba umntu, indlela abathetha ulwimi lwabo umzimba ukuba igama kodwa ezimbalwa kwaye qaphela bonke bephela bengakuqondi ukuba ukhangela kubo.
A umnqwazi cowboy kunye drawl Texas umzekelo, ndithi kuni ngephanyazo apho umntu kwaye apho ukuma iyantlukwano zenkcubeko zeli lizwe. iinwele iblitshwe nezivakalisi neziphela ngo 'dude’ ndithi kuni kakhulu okufanayo. azishukumisa nervous, zizula izandla yinqobo besonwaya zonke athethe into malunga nomntu othandana isiphathi aze akuncede wenze isigqibo malunga nokuba ufanele wenze ngomhla okanye wenze sisingxengxezo.
Ubuso ngobuso, umelwe Makhesenze imiqondiso ezahlukeneyo ndithi kuni izixa kakhulu malunga mntu ucinga encokola.
online, umelwe nto ukuya kodwa into umntu ubeka kwiprofayili zabo ubhala email yabo.
“Ngokungafaniyo ubudlelwane bokwenene-ubomi apho banolwazi ezinye izinto umntu drives, oko ngokwenene ezikhangeleka, abaphila ngayo, njalo, intanethi kuba akukho namnye kuloo,” utsho uLisa Hupman, indawo cyberdater lemfazwe kumisa WildXangel.com, iwebhusayithi esilumkisa ezinye daters ngeengozi ulazi online. “Undinika trust ngaphezu kungenxa okunene kuba benyanzelekile.”
Kwaye isizathu sokuba akukho ukhetho-okanye ngokucokisekileyo ngakumbi, ukhetho-malunga kancinane izinga ukusithemba kumnika sona ukuba sisixhobo esiphambili esikhusela intanethi yinto enye ekhusela nutcase athile ngubani roams le Web: ungaziwa.
Akukho ndlela abantu ababini ingananwa emails online ukwazi Uchazo wokwenene nabantu uyayibhala ukuba. Le email ufumana kumazwe kwi-inbox ibekwe kwisiza.
Igama ukhetha yenye uyila nokuba bendithe ndazala akukho ngokunxulumene yesazisi yakho yokwenyani.
Logama nje asivumeli yakho yokwenene, Igama elipheleleyo baphume phambi kokuba wakha i isixa esithile sentembeko, uqala ulwalamano online akhuselwe ngokupheleleyo yinto yokuba umntu ubhala nawe ingazi wena, apho uhlala okanye ngendlela abakuwenza ngayo abambelele kuwe ngaphandle site.
Xa uthandana online, ngubani ukuthandana ukuba Akwenzayo bajonge ikhona kuphela kwi-Intanethi. Kukho umqobo epheleleyo phakathi kokuzeyisa yakho intanethi yaye yokwenene kuwe kwaye sithinteli ukhuseleko kwakho ibhetele nxamnye nayiphi wacko usenokuba nelishwa ukuhlangabezana online ngokwaneleyo.
Ukuba unalo ilishwa ukuba kudibana loony kwisiza abathandanayo, nje kokuba igcinwe yesazisi sakho imfihlelo, akukho ndlela yokuba bakwazi iyakukhathaza ebomini.
Kanjalo, ebalungelayo kakhulu. Kuba akukho ndlela kuwe ukukhangela iinkcukacha umntu odibana online, umelwe wayengayazi ukuba ugqirha lowo wandithumayo imayile wafumana isiqinisekiso sakhe isidanga ukusuka Harvard, njengoko ibango, okanye yayalela ukususela lewebhu Romania. Umelwe nofifi ukuba ngokwenene ukusebenza ngenxa Uxolo Corps kwiminyaka emibini edlulileyo okanye wachitha ukuba mailbags ixesha yokuthunga kwindawo isisele karhulumente. Kwaye umelwe akukho lokuba ngaba umntu ochazwe ngokwabo njengoko ndiyazingca nilushiye nguwe wedwa xa uzixelele ukuba unomdla okanye finini ngaphandle emnyango yakho phambi belindele ukuba uze ekhaya emsebenzini.
Bekuya kuba mnandi xa kwakukho lokutshekisha ukuba uhambe xa udibana nomntu intanethi ngokusebenzisa. Ukuba kukhankanywe 'iimela’ ngapha kwamaxesha amathathu kwi-imeyile kuqala, unokuba phawula ibhokisi. Ukuba kukhankanywe ukuba bakhonza izigwebo ezininzi mthetho lobundlobongela, ukuba ubuya kukhokelela phawula enye ibhokisi. Ukuba wathetha ubuhlobo babo kunye Unabomber eyayiza kubabetha ngaphandle.
Kodwa akukho lula.
Eyona ndlela ibhetele okukugcina ukhuselekile ngekhompyutha ukulandela imithetho ezintathu ezilula: ukugcina ukungaziwa yakho kangangoko kunokwenzeka; khumbula ukuba, ukuba kukho into uziva engalunganga, mhlawumbi; kwaye bazisika ngokukhawuleza kwaye ngokupheleleyo nje unuka into Fishy.